Positivism kunye nethemba! : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Aprili 2019	• 10 Comments
"Fumana ubomiIngaba i-idiom kunye negama elisetyenziswe kumazwe ngamazwe. Kujoliswe njengokukhala ukubonisa ukuba umntu ojongene nayo usebenzisa ixesha elidlulileyo kwizinto ezincinane okanye ezingenathemba (ngokwe-Wikipedia). Yonke into ebhalwe nguMartin Vrijland idlalwa ngokuba yinto enqabileyo engathembekiyo. "UUjolise ngakumbi kwizinto ezintle. Awukwazi ukwenza nantoni na malunga noko kuhamba kakubi kweli hlabathi. Konke kunzima kakhulu kwaye kuyingozi kwaye iqukethe umsindo omkhulu. Ukuba wenza igalelo elihle kuluntu kwaye unethemba, uzisa neenguqu. " Kwaye udla ukuva amazwana angakumbi xa ubhala iindaba ezihlalutyo. Unomdla ngokwaneleyo, izinto ezinjalo azichazwanga xa kuziwa kwezopolitiko okanye iziteshi zesebe eziqhelekileyo.
Ndifuna nje ukunceda umfundi ukuba aphume kwiphupha: into endiyenzayo inethemba elihle kwaye lilungile! Injongo yinto yokuba njengomfundi uvuselela kwi-hypnosis yakho kwaye ubone ukuba yeyiphi i-cellar oyijikelezile. Akunjalo kuphela: ukuba ubona kuyo unako ukuzisa utshintsho.
Uliphi na ithemba?
Ngaba unethemba xa uhleka kakhulu kwaye wenze amahlaya kunye namahlaya njengoGeer neGoor? Umntu osayiniweyo akenzi amahlaya amaninzi. Ukhomba wena, umzekelo, kwimeko yoluntu ekhulayo. Ungayifumana loo nto ingenanto okanye engathembekiyo ngenxa yokuba awufuni ukuyiva, kodwa unokufumana ukuphuhliswa kakubi okwenzekayo kwaye uyavuya kukuba umntu uya kukuqonda.
Ungayifumana ingalunganga xa umhlobo ebiza "Hayi, eceleni, imoto iza!"(Nangona ufuna ukuwela ngesitrato ngokucebile kwaye ungayiboni imoto) okanye unombulelo kwaye uyonwabile ukuba uye wabonisa ingozi kuwe. "UEwe, kodwa loo polisa yipolisa ayinanto. Konke kuyimfuneko ngenxa yoko konke ukwesaba nokunye". Ucinga ngaloo ndlela kuba ukholelwa ukuba uyadla imango enomsoco. "UImango elamnandi? Luhlobo luni lwe-bullshit yilelo?"Ndizama ukukubonisa ukuba iTV nakwamanye amajelo akubeka phantsi kwe-hypnosis ngokusebenzisa iindlela zokukhusela ukuba ungaboni into oyidlayo. Ucinga, nje ngevidiyo elapha ngezantsi, ukuba uthatha into entle kwaye andinakukufakazela ukuba imuncu. I-hypnosis ikuvimbela ukuba ungaboni nokuva. I-hypnotist ikuxelele ukuba imango enomnandi. Abaxhasi bamabonwakude bakuthathela isidingo sepolisa kwaye awuboni ukuba igoli lakho lwakhiwe. (Khangela uze ufunde ngaphantsi kwevidiyo. Ngokwenene yenza njalo!)
"Ewe, kodwa andinako ukuxhomekeka. Kwaye i-TV ayikho i-hypnosis. Amaphephandaba kunye nomsasazo."Emva koko awufundanga ngokwaneleyo ukuba kusebenza njani. Kodwa sele ndiyayiqonda; kungase kube nzima kwaye kuphazamise ngoku. Unqwenela ukuba nethemba. Ucinga ukuba:Ewe, ndiyicinga ukuba ndiyidla imango enomnandi, ndiyakhathalela. Emva koko ndivakalelwa ngakumbi!"Ngoko awufuni ukuva imoto ejikeleza kuwe xa kukho ingozi? Kulungile. Awuboni ingozi kwaye awufuni ukuyibona. Ewe, oko kukhetha kwakho. Ufikile kule webhusayithi ngaphandle kwesazi kwaye unokufunda izinto ozicingayo: "Oku akunakwenzeka nonke. Zonke iindaba zixela ngokwahlukileyo. Akuyena wonke umntu oqala ukulala nokukhohlisa!"Awufuni ukucinga ngaloo ndlela. Awukwazi ukucinga ngaloo ndlela. Unqwenela ukuthembela ekulungileyo kwabantu. Unqwenela ukuthembela kukulunga kweenkokheli zezopolitiko. Okulungileyo:Ayikho imoto eqhuma kuwe ngesivinini esiphezulu. Hlala uxolo phakathi kwendlela."
Ndiyifaka intamo yam intliziyo kunye nale website. Kuye kwindleko ezininzi kumnandi kunye nosizi. "UEwe, yiyo iphoso lakho. Kukhethile ukukhetha ukubhala."Ngenxa yokuba ndandizibona ngathi siqhutyelwa kwisicupho ngeengxaki ezizenzekelayo, apho abantu bebiwe kwiinkululeko ezininzi. Imithetho emininzi nemimiselo kunye neemfuno zihlala zithengiswa ngathi ngeengxaki ezithatyathwa yiendaba ezenza ukuba sikholelwe ukuba zikhona. Eyona nto eyenza uqiniseke! Kuwo wonke umabonwakude onokubonwa kuyo yonke intlungu, oku kuthetha ukuba sifuna ngaphezulu "amanyathelo okukhusela"! "UEwe, kodwa ubuncinci bayayigqoba kwimiboniso ngokuhlekisa kunye neentsebenzo, ezifana neJeroen Pauw okanye iDWDD". Leyo nxalenye yecandelo le-hypnosis esebenzisa abantu. Ndikukhomba ngengozi esondeleyo kwaye akuyiyo into engeyiyo okanye ingabi nongxaki; kulungile! Kufuneka kukuqaphelise ukuze ukwazi ukuxhamla kwicala phambi kokuba imoto iqhume kuwe. Ngoko kulungile!
Unyaka wonke ndifikelela kuma-4,5 abantu base-Dutch (bona i-counter) kwaye niyazi indlela yokujongana nabo kunye nepolisa ebonakalayo. Esi sicwangciso senziwa phambi kwamehlo ethu, kodwa siqhubeka sicinga ukuba siyidla imango enomsoco. Yonke imithetho eqhubekayo kunye nayo yonke iteknoloji esiyibonayo ibonakala yenzelwe ukwakha inkqubo yokulinda kwedijithali apho yonke into, yonke ingxoxo kunye nayo yonke into isetyenziselwa kwaye apho iindawo ezinkulu zihlala njengabahloli kunye nabalindi bezinto ezifanayo. inkqubo yenzeke. Sitheba kwi-model yaseTshayina, kodwa kungekhona ngesingeniso esilungileyo esenzeka e-China ngeSeshane yeMatriki inkqubo. Siyakhutshwa phantsi kwe-hypnosis kwaye siyamkela umthetho owenza ukuba isingeniso senzeke. Awufuni ukuva oko, kuba akunjalo? Kuhle! Kungenxa yokuba ukuba uyazi ukuba unokuthatha inyathelo kuwo. Abezopolitiko kunye nokunyuka kokunyamezela akuyi kukwenza oko. Kufuneka wenze oko ngokwakho.
Ixesha lokuba wenze utshintsho ngokwakho. Kwiminyaka eyisixhenxe edlulileyo ndagqiba ekubeni ndenze loo nto, ndishiye umsebenzi wam kwaye ndiqale ukubhala. Lona alukhethi lula, kuba unokulahlekelwa zonke iintlobo zobuqiniseko, kodwa ndazibuza ukuba ndifuna ukubukela indlela esithatha ngayo ngokukhawuleza ukuba siqhutyelwe kwiimeko zamapolisa kunye nejelo zedijithali ngokukhohlisa nokukhohlisa okanye nokuba ndiza kulwa ngaphambi kokukhawuleza. Njengazo zonke iinkcaso ihlolwe; ngubani omele ngokwenene alethe utshintsho? Ziphela ngokufihlakeleyo zikhokelela ekuhlaleni ngaphaya komgwaqo ukuya kwiziko elithile legunya kunye namanye amanyathelo karhulumente karhulumente. Leyo idlulayo kwaye isasazeka kwizizukulwana, kodwa ngoku siphumelele. Uchasiso lokwenene kufuneka ngoko luvela kumntu ngamnye: kusuka kuwe. Andifuni ukuyibiza ngokuthi "inkcaso," kuba elo lifihlile i-pogeity eyaziwayo ye-Hegelian. Okunye kunye nokunciphisa ibhetri kubonelela ngogesi ngokuthe ngqo. Iingqungquthela (i-thesis kunye ne-anti-thssis) ikhokelela ekuqaliseni. Yingakho sikhuthazwa ukuba sikhethe iqela okanye b: kwesobunxele, ngokufanelekileyo, kunye nokuchasene, njalo njalo. ezo mpikiswano zenziwa ngamabomu ngamajelo.
Sinokwenza njani utshintsho? Sinokwenza oko nge-revolution. Impinduko eqala entliziyweni; kumgangatho womphefumlo. Iqala ngokutshintsha kokholo 'utshintsho luvela phezulu"ukuba"utshintsho luvela kum". Inguquko yangempela iqala ngokukholelwa kwimpembelelo enamandla yomphefumlo wakho kwihlabathi. Yibize 'ifuthe lefly butterfly' okanye uyibize 'ukuhla etafuleni elikhanyayo', umahluko phakathi kwamandla. Sikholwa kuyo impembelelo yentando yethu lahleka. Sikhohlile ukuba ngubani ngokwenene sisezingeni lomphefumlo kwaye sikhohlile ukuba yintoni inempembelelo enamandla ngamnye umntu anokuyenza kwindawo yakhe. Oko kuqala ngesigqibo esinamandla sokuthanda. Makhe senze i-mantra kuyo. Thetha yona:
"Ukhetho lwam lunempembelelo enkulu kwimeko yam kwaye nakwihlabathi. Ukususela kwangoku ndiya kuyenza utshintsho ngokwam!"
Emva kokuba sibona ukuba umphefumlo uyisishukumisela emva kokukhetha kwethu kunye nazo zonke izenzo zethu, ngoko siqala ukuphulaphula ngakumbi loo mphefumlo kwaye ngaphantsi kokuthi 'yintoni ekhuselekile neqinisekile'. Siya kwenza ukhetho oluqinileyo; baqaphele ukuyeka ukuhamba kwexesha elifutshane kunye nokuzithemba ukuzithemba kwenguqu ezi zizokwenza.
Utshintsho olukhulu aluveli luvela phezulu, okanye luvela kumanyano olawulwayo (olawulwayo), okanye ukusuka bezopolitiki of iiplanga zenkcaso okanye imithombo yamaphephandaba amatsha. Inguqu enkulu iqala kuwe. Oko kuqala ngezenzo ozozenza ukususela ngoku ngoku. Iqala ngokuphulaphula intliziyo yakho; isango ngomphefumlo wakho. Ubani ohlala kwintlambo yobomi bakho? Ngaba nguwe ngokwakho okanye ngaba (ngeendlela zokulawula ukwesaba kunye nokulahlekelwa kwezinto eziqinisekileyo) kwibhanki yakho, umphathi, iqela lezopolitiko, umsebenzi wakho okanye nayiphi na into? Ewe, unokhe ungakholelwa ukuba ukhetho lwakho lunempembelelo kwihlabathi, kuba i-steam locomotive igijima! Kutheni ucinga ukuba izihlwele zabantu ziye zacetywa ukusuka kumntwana ukuya kwindlabo ukuze ziqhubele phambili kwaye zithathe inxaxheba kwinkqubo? Ngenxa yokuba abo bamandla banjengokufa ngenxa yempembelelo enamandla yomphefumlo ovusayo. "UAsifuni enye iqhawe?"UTina Turner? Ewe siyenzayo! Wonke umntu onqabileyo ukuvumela ukuhamba kwezinto ezibonakalayo zexesha elifutshane kwaye aqale ukwenza entliziyweni, uya kuzisa utshintsho olukhulu. Yilapho apho ngokwenene uhlaziyo luqala.
I-Revolution, yintoni na loo nto?
Ndiyanincenga ukuba uqale le nguqulo namhlanje kwaye uzibuze:Ngaba ndikhetha ukunyaniseka kwam ubuxoki kwaye ngaba ndivumela abo banamandla ukuba baqulunqe i-script yabo ngaphezulu okanye ngaba ndiyabona ukuba xa sonke senza ukhetho oluhlukeneyo kwimeko yethu yangoku, ngaba ndingenza loo tshintsho?"
"Ewe, kodwa ndingumcebisi wecala kwaye kufuneka ndibeke abantu ngaphandle kwendlu ukuze bazalise ifayile yam"
"Ewe, kodwa ndiyipolisa kwaye kufuneka ndiphoqe umnyango, kuba mhlawumbi abantu abayi kuze bahlawule amatyala abo"
"Ewe, kodwa ndingumsebenzi wokunyamekela ulutsha kwaye ukuba andiyikubeka loo mntwana kwisitokhwe esinqununu, akaze afunde indlela yokuthobela imithetho"
"Ewe, kodwa ndingumqeshwa wenkonzo yoluntu kwaye kufuneka ndibenze ukuhlola ekhaya ukukhusela ubuqhetseba benzuzo"
"Ewe, kodwa mna ... kwaye oko ndenzayo kulungile kuphela"
Ngaba unokuqwalasela naluphi utshintsho onokuyenza ngokuyeka ukugcina inkqubo? Kutheni sisaya kwiipolon ukuze sivotele abadlali abakwazi ukuthengisa ukubonakala kwentando yesininzi ngakumbi, kodwa ekugqibeleni batshabalalise ngokunyanzeliswa kwamanyathelo ngokunyenga nokukhohlisa? Kutheni singakholelwa kumandla okuzithemba kunye nenzululwazi yentlangano ngokusekelwe kukunyaniseka nangokunyaniseka. Kutheni na? Ngenxa yokuba siyilo ngolu hlobo lokuba yonke into imele ilawulwe ngokulawulwa ukusuka phezulu. Kuba ukususela ebuntwaneni siphila kwinkqubo esekelwe kwimithetho emininzi kwaye sinoyika ukuba izinto ziya kuhamba ngaphandle kwazo zonke ezo mithetho. Asifuni ukubuyela kwixesha eliphambili, ngaba thina? Sisafuna izibane zendlela kunye neendlela zendlela yokuhamba ukuze zingabikho. Ngaba asiyidinga abaqhubi bezo mithetho? Ngaba ufuna ukuya kwintlobo yokuhlaselwa kweVrijland? Uyazi into endiyifunayo? Ukuba uza kuphinda ufumene impembelelo enamandla yentliziyo yakho (funda 'umphefumlo') kwaye ufunde ukubona ukuba akusadingeki sidlale umdlalo ngokubhekiselele kwiskripthi esandulelwe ngaphambili. Chofoza nje esi sixhobo ukufumanisa ukuba yintoni le script.
Ixesha lokuguqulwa komphefumlo wakho. Kwaye kuqala ngokukhetha kwakho. Iqala ngokuphulaphula intliziyo yakho kunye nesazela sakho. Vala iTV yakho, cima yonke imithombo yeendaba uze uzame ukuziqhawula kwiprogram oyisebenzisayo ukuhlawula yonke imihla ukuze uva ilizwi lakho langaphakathi kwakhona. Leli lizwi lingaphakathi, akunjalo, umgibe wokuthetha othetha nawe. Nguwo umphefumlo wakho owenza ukhetho olucocekileyo nolushushu; ebonisa ukuba izinto eziqinisekileyo zibonakalisiweyo kwaye zikwazi ukuba zinamandla. Umphefumlo wakho ukubonisa oko lwakho utshintsho inempembelelo enkulu kwindlela kunye neskripthi.
Yiba nethemba kunye nethemba
Ukususela kwangoku sinika inkcazelo entsha ekunikeni ithemba kunye nethemba. Ukuba nesimo sengqondo kukuba uyazama ukujamelana neengozi, ukuze ukwazi ukuthatha amanyathelo okuthintela usizi kwixesha elizayo. Ukuba nesimo esihle kukuba ngoko uthetha ngeemoto ezibethelela kumhlobo wakho, omi phakathi kwendlela. Unethemba lokuba uzimisele ukuphakamisa imiba kunye neengongelo ezibonakalayo ezisetyenziswe ngamaphephandaba ukuze zenze imithetho emininzi. Unethemba lokuba uzimisele ukujongana nento eyenzekayo kwaye uguquko oluvela ngaphakathi lwakho luqala namhlanje. Unethemba lokuba uthetha intloko yakho entlabathi kwaye ungahlali nje kwifu elimnyama. Ukuba nethemba kunye nethemba kuthetha ukuba ubona okwenzekayo kuwe malunga noko kukuxabisa kwaye ubone ukuba ngokuchanekileyo 'ukuba yinto engafanelekiyo kunye neengxaki.' Ngokuqinisekileyo uya kuziva ungcono ngakumbi ngoku ukuba uhlala kwibharenti kunye ne-orchestra kwaye kungekudala ungava ukuba kukho umgodi kwinqanawa yomkhumbi. Ngokuphindaphindiweyo, nangona kunjalo, mhlawumbi uncomeka ngakumbi xa ukhethe ukuphulaphula izilumkiso kwaye ukhuselekile kwi-raft life. Izilumkiso kunye nokuqwashisa abantu abanakuchazwa ngokuthi "ukungalunganga" okanye "ukungathembeki." Emva koko uphulaphule i-orchestra kwaye ibuyele kakhulu xa amanzi egawula iinqanawa kunye nabahlali beqela.
Qala namhlanje ngesimo sengqondo esilungileyo ebomini kwaye uqale ukuguqulwa kwentliziyo yakho.
Ukuba uyaluxabisa amanqaku am, nceda uthathe ixesha lokundinceda ngegalelo elincinci kwaye ube lilungu. Siyabulela kwangaphambili.
Inqaku lesigidi: konke kuhamba ngcono kuba ukhetho luza
tags: umsindo, eziziimbalasane, ezimbi, ezimbi, nethemba, nethemba, ukungazinzi, ngxaki, ezintle, positivism, yakhe
25 Aprili 2019 kwi-13: 29
25 Aprili 2019 kwi-20: 37
Emva kokuba uqaphele oko kukuthandayo, kunokuziva ucinezelekile, kuba kubonakala ngathi uwedwa.
Ukuba abaninzi abantu batyelela indawo yakho bafakazela ukuba iqela likhulu. Ngokuqinisekileyo akuyi kuba nomhlaba wonke umntu kanye kwaye akunandaba.
IWW kufuneka iphinde isetyenziswe kwinyaniso kwakhona, i-reprogramming
25 Aprili 2019 kwi-20: 41
Imfesane eminwe emikhulu kweso sikrini esincinci ayisisebenzisi.
ukuphindaphinda kwengqondo kuthatha ixesha.
Ndicinga ukuba le njongo yokuzalwa apha emhlabeni kule meko. Zifumene kwaye kukho enye kuphela ekwazi ukushiya isiphepho emva (nangona isagubha).
25 Aprili 2019 kwi-22: 30
Ndiyabonga kakhulu kule nqaku ecacileyo.
Ngaba kuya kuba mnandi ukuba ibhalwe ephepheni kunye kanye
isasazwa kwizikhululo endaweni ye-metro
26 Aprili 2019 kwi-09: 47
Ubomi obuqhelekileyo kunye nemithetho emininzi!
28 Aprili 2019 kwi-21: 46
Ndiyabulela kuwe (ngokukhawuleza) ndisindayo kuloo ntolongo engabonakaliyo.
Hayi andiyivota ...
Uvoti alukwazi ukulawulwa ... urhulumente ohlola inyama yakhe.
Ewe, ndishiye umsebenzi wam ukukhusela.
Kukho imfuno kuphela kwizinga eliphezulu, inkqubo igule!
EWE mna ndifumana inkululeko eninzi kwaye ndivuya ngakumbi!
Ngoku ndingazibona ngokugqithiseleyo ngeentengiso!
29 Aprili 2019 kwi-04: 43
Yiloo nto endiyenzela yona!
1 Meyi 2019 kwi-11: 50
Ngamagama amlula, ndifuna ukudlulisela umyalezo.
Kwiminyaka emininzi ihlabathi lilawulwa ngabantu abaye banquma ukuba bafuna ukulawula, bafuna ukuba namandla phezu kwabantu, nokunyanzela abantu ukuba benze oko bafuna.
Abemi kulo lonke ihlabathi baye bafundiswa iminyaka emininzi ngalabo abasemagunyeni, baphila ngokwesaba, besoyika ukuba bahlwaywe, bavalelwe ngaphandle, bavalelwe.
Abemi, abantu, abanako ukuba bafuna ukuba bani, abakhululekile kwaye banyanzelekile ukuthobela zonke iintlobo (imithetho yobuwula) nemithetho, imithetho kunye nemithetho eyokuthintela kuyo yonke into oyifunayo ebomini.
Kodwa kuthekani ukuba wonke umntu osebenzayo, nakweyiphi na icandelo, kodwa ngokwenene wonke umntu ehlabathini lonke, uya kubeka phantsi umsebenzi wabo we-1 ngosuku, khangela ukuba kwenzekani, usuku lwe-1, yintoni usuku lwe-1 ebomini.
Masize silinde, ngoMvulo 3 Juni 2019 ngumhla omkhulu ukwenza oko.
Susa umfaniswano wakho, cima ikhomputer yakho, vala isitolo sakho, yibeke igama, kodwa yenza.
Kwaye ootywala kunye namafama, unendima enkulu kule nto kuba ngaphandle kweeshalafu zakho ezingenanto kwiivenkile, akukho sinkwa kwisitfuli, kodwa usuku lwe-1 luyakwazi ukujongana.
Kwaye ukuba oko akukwanele, siyakwenza kwakhona kwaye mhlawumbi kwakhona.
Abo basemagunyeni abamele nantoni na, baxhomekeke kubantu abafuna ukulawula, basidinga kwaye baye benza okusemandleni abo kangangokuba kweenkulungwane.
Sonke singabantu abakhululekile kwaye asimele samukele.
Andikho kwi-Social Media ngokwam, kodwa baninzi abanye abantu kwaye ndiyathemba ukuba bafuna ukwabelana nalo myalezo kangangoko kunokwenzeka.
Thina abantu singenza okuthile malunga nayo, sibeke ukwesaba kwakho kwaye wenze.
1 Meyi 2019 kwi-11: 56
Ndiyabulela uMarga. Masithembele ukuba abantu ngokwenene bafaka ukwesaba kwabo (okanye ubuvila) ngaphandle kwaye baqale ukwenza into.
9 Juni 2019 kwi-21: 35
Kukho iziphazamiso ezininzi zomzimba nengqondo namhlanje. Siqhutywa ngumnqweno kwaye silawulwa nguloyiko.
Sineendlela ezininzi ze-hypnosis ngexesha elifanayo, isiphumo saso isingqungquthela somculo kunye nokuqhubela phambili ukuqhubela abantu njengefowwheel kwindawo efanayo.
Ngokuqinisekileyo lixesha lokuguqula. Kodwa le nguquko kufuneka iqale kuqala engqondweni yomntu ngamnye.
Asikwazi ukujolisa iifolothi kwikosi yezilwanyana, utyholi okanye ikhabhinethi, engenzi nto.
Oku kufana nokulwa namaza avela elwandle.
Ayikho igazi kwaye akukho abafel 'ukholo, ukwahlula kunye nokulawula yinto ekhethekileyo yalo mdlali.
Le nto kufuneka iqhutywe ngendlela eyahlukileyo.
Abantu abafuni ukwenza nantoni na kodwa kulungile ukuqala kunye nabo.
Qala ifilosofi, yintoni ebaluleke ngokwenene ebomini? Kutheni ndiphazamiseka imihla ngemihla?
Ngubani othi, kutheni na kunjalo? Ngubani oza kuthetha ntoni kum? U yibiza! Buza yonke into malunga nayo yonke into!
Ukuphuhlisa kwangaphakathi kudinga ingqalelo kunye nokuthula, cima iTV kunye nomsakazo.
Funda incwadi evuselela umbandela.
Emva kwexesha elide lokurhoxisa, uxolo lwengqondo lubuye luqwalaselwe ngokwenene.
Yona yembono yokubeka izinto ngendlela ebonakalayo kwaye idibanise yonke into esisijikelezile.
Ubungakanani, iimfuno, ubudlelwane, umsebenzi, urhulumente, imigangatho, iimpawu.
Abantu banamandla onke kwaye banako izinto ezintle.
Kwaye xa abantu beqonda oko, ndicinga ukuba okokuqala kukutshintsha.
« URobert Jensen kunye noJensen.nl isicwangciso sobutyebi sezokuphepha se-Infowars eNetherlands?
Ukuhamba kukaHenk Otten kwiForam yeDemokhrasi (Fvd) kuqikelelwa »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.954.604